Samatar iyo Cabdiraxmaan Jaamac | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Siddee Aasiidh Looga Dhiggaa Kaadida Iyadoo Alkaline ah?
Siddeetamaadkii Soomaaliya waa ay saaxiibbo yareysay. Waxaa batay dhaliisha iyo eedeymaha uu caalamku u soo jeedinayo Dowladda. Soomaaliya waxay u baahatay in ay is fasirto. In ay caalamka isu fasirto. La fahmo marxaladda ay mareyso. Dowladdii saaxiib ah la sii xoojiyo saaxiibtinnimadeeda, middii aan saxiib ahayna la isku dayo in saaxiib laga yeesho ama ugu yaraan la xaqiijiyo in aanay cadow ku noqon Soomaaliya. Si taas loo yeelo, Madaxweynaha Soomaaliya waxaa uu soo saaray wareegto. Madaxda dalka ugu sarreysa oo dhan oo uu isagu ugu horreeyo ayaa mid kasta loo qoondeeyay in uu wafdi hoggaamiyo, oo uu wadahadal la soo yeesho Madaxda hal dal ama ka badan.
Madaxda wufuudda ee ay wareegtadu xustay waxaa ugu horreeyay Madaxweynaha iyo dhamaanba Xubnaha shanta ah ee Guddiga Siyaasadda oo iyagu siyaasadda dalka ugu sarreeya.Waa Maxamed Siyaad Barre, Maxamed Cali Samatar, Xuseen Kulmiye Afrax, Axmed Maxamuud Faarax iyo Axmed Suleymaan Cabdalla.
Wafdiga ugu horreeyay ee Dibadda u dhoofa waxaa hoggaaminayay Madaxweynaha. Habeen ayuu dhoofay. Inta aanuu dhoofin wuxuu isla habeenkaa ka hadlay Baarlamaanka. Wuxuu fasiray wareegtada. Wuxuuna ku dhawaaqay in Guddoomiyaha Baarlamaanka, Maxamed Ibraahim Liiqliiqato, uu yahay Ku Simaha Madaxweynaha dalka. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee Taliska Kacaanku uu Ku Sime Madaxweyne ka dhigo Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Madaxweynaha waxaa gegida dayaaradaha ku sii sagootiyay raggii isaga ku soo xigay, sida Samatar iyo Kulmiye, Ku Simaha Madaxweynaha ahna Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Madax kale oo badan oo Golaha Dhexe ee Xisbiga iyo Golaha Wasiirrada xubno ka ah. Waagu markuu beryay saacaddu markii ay ahayd 06:30 ayuu Radio Muqdisho Warka ku billaabay dhoofka Madaxweynaha. Raadiyuhu wuxuu raacay habmaamuuska Dowladda ee kala mudnaanta Madaxda ee dhaqanka ahayd. Wuxuu sheegay in Siyaad dhoofay ay sagootiyeenna Samatar, Kulmiye… Ku Simaha Madaxweynuhu iyo Madax kale.
Yaa hadda Dalka ka Mas’uul ah?
Wasiirka Warfaafinta, Yaasiin Xaaji Ismaaciil ayaa waxaa subaxdaa telefoon u soo diray Wasiir Cabdiraxmaan Jaamac Barre. Wuxuu xusuusiyay ballantii Madaxweynaha ee xalay oo ahayd in ku simihiisu uu yahay Maxamed Ibraahim Liiqliiqto. Ka dibna isaga oo taas ka duulaya ayuu weydiiyay in uu fasiro sababta ay idaacaddu markii ay ka hadlaysay saaka sagootinta Madaxweynaha ay mudnaanta u siisay Samatar, Kulmiye iyo Xubnihii kale ee Guddiga Siyaasadda? Sow ma ahayn in mudnaanta koowaad uu lahaado Ku Simaha Madaxweynaha.
Yaasiin dooddiisu waxay ku salsneyd fahamkiisa ah in Mudnaanta ay leeyihiin xubnaha Guddiga Siyaasaddu laakiin maaddaama ay dhoofayaan maalin iyo laba gudahood ay tahay Sababta uu Liiqliiqato ku noqday ku sime Madaxweyne. Inta ay ayagu joogaanse ay ka leeyihiin mudnaanta.
Cabdiraxmaan wuxuu ku dooday in aan Madaxweynuhu dhihin, marka Samatar iyo Guddiga Siyaasaddu ay baxaan ayuu Liiqliiqato noqon doonaa Ku Sime. Wuxuu yiri inta aan maqan ahay waxaa Ku Sime ah Liiqliiqto.
Markii ay isqancin kari waayeen, Yaasiin wuxuu aaday Madaxtooyada. Wuxuu Xafiiskiisa ugu tegey Maxamed Cali Samatar si uu u kala caddeeyo arrinkaan. Waxaan u fahamnay in Samatar uu u soo sheegay Yaasiin in idaacaddu qaabka ay wax u fahamtay una sheegtay uu sax yahay. Inta tegitaankooda ka harreysanna ay Xubnaha Guddiga Siyaasaddu iyagu mudnaanta ka leeyihiin Ku Simaha Madaxweynaha.
Yaasiin markii uu ku soo laabtay Wasaaradda Warfaafinta ayuu la xiriiray Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo uu isku dayay in uu sidaa wax u fahamsiiyo. Laakiin Cabdiraxmaan wuxuu ku adkeystay bartiisii hore. Wuxuuna u dhigay in Yaasiin uu jebinaayo amarka Madaxweynaha.
Lama aqoon Madaxweynaha oo dalka Dibadda uga dhoofaya in ay cid kale ku sime u noqoto oo aan ahayn Maxamed Cali Samatar. Haddii uu isna maqan yahay muran ma geli jirin Xuseen Kulmiye in uu qabto.
Liiqliiqato inkasta oo uu yahay Generaal ciidan ahaan ka mudan qaar badan oo iyaga ka mid ah, haddana kuma jiro 25-kii Sarkaal ee Golaha Sare oo ay dad badani u arkayeen nimanka ay taladu ka go’do.
Kuma jiro shanta nin ee Xisbiga u sarreysa ee loo yaqaan Guddiga Siyaasadda.
Ma muuqato si uu u xukumi karo Maxamed Cali Samatar, Kulmiye iyo Xubnaha kale ee Guddiga Siyaasadda.
Waxay dad badani u macneysteen in ay kulligood dibadda u dhoofayaan sidaa darteed uu Madaxweynuhu Liiqliiqto uga dhigay ku sime.
Telefoonnada uu Wasiirku dirayay intooda badan waxaa goob joog ah weriyayaasha wararka iyo barnaamijyada ka diyaarinayay howlahaan. Sababta ay Wasiirka Warfaafinta arrintu u gubeyso, labada mas’uul ee kalena ay u cadaadinayaan ma ahan keliya warkii baxay in qiil loo helo. Haa, taasi meesha wey ku jirtaa. Waxaa ka muhiimsan wararka soo socda oo uu ka mid yahay TV-ga oo aan weli warkiisa la gaarin sida looga sheegi doono warkaan. Mas’uulkee la siinayaa mudnaanta koowaad?
Ma filayo in Samatar uu arrinta u fasiray Cabdiraxmaan Jaamac Barre. Umana maleynayo in Cabdiraxmaan uu ku dhiiran karay in uu Samatar ula tago in uu baro in ay jirto cid isaga ka sarreysa oo aan Maxamed Siyaad ahayn.
Laakiin labada dhinac mid waliba wuxuu xoogga saaray in ay Saxaafaddu isaga fasirkiisa raacdo. Waxaa dhex ku jire laga dhigtay Wasiirka Warfaafinta oo dhex taagan, isla markaana midba dhan ka garaacayaa laba garab oo heerka ugu sarreeeya ee Dowladda matalayo oo iyagu biyo hoostood iska arkay. Waxaa weriye goobjoog ahaa uu ii sheegay in Yaasiin uu yiri, Bal maxaa Madaxweynaha ka yeersiiyay kelmeddaan?
Cabdiraxmaan Jaamac waxaa lagu tiriyaa in uu Hoggaamiye u ahaa ama ugu yaraan ka mid ahaa horseedka Siyaasiyiin iyo saraakiil sare oo ciidan oo ku kacay Samatar iyo inta la jaalka ah, ka dib shilkii baabuur ee Madaxweynaha ee 1986.
Fallaago ma adeegsadeen laakiin kooxda gadoodday magaceeda waxaa la dhihi jiray Tuutaaleey.
Tags: Samatar iyo Cabdiraxmaan Jaamac
Next post Maxaabbiista Soomaaliyeed ee Dibadda
Previous post Dib u Milicso Mustaqbalka Villa Soomaaliya